Qoritaanka Curiska- Guudmar – Garanuug
Home / Af Soomaali / Tusaha Hab-qorista / Qoritaanka Curiska- Guudmar
admin January 1, 2017	Tusaha Hab-qorista Leave a comment 7,883 Views
Waa Maxay Curisku?
Curisku waa qoraal habaysan oo ku saabsan hal mawduuc. Curisku waa uu ka geddisan yahay maqaalka, inkasta oo ay aad isugu macno dhowyihiin, mararka qaarna isku si loo adeegsado. Sida maqaalka oo kale, curisku waxa uu yeeshaa gundhig (thesis), taas oo lagu soo bandhigo, si toos ah ama si dadban, ujeeddadiisa. Badanaana, curisku waa uu ka dheeryahay maqaalka, oo ujeeddadiisu waa ay ka gundheertahay tan maqaalka. Sidaas awgeed, curisku waa uu ka cilmiyaysan yahay maqaalka.
Ujeeddooyin kala duwan ayaa curiska loo qoraa: waxaa lagu falanqeeyaa arrimo cilmi ah, oo ka baaraandegis iyo xaqiijin u baahan; waxaa la isku barbardhigaa labo arrimoood iyada oo sida ay u kala duwan yihiin ama isugu mid yihiin la sharxayo; waxaa lagu qeexaa fikrad; waxaa lagu soo gudbiyaa dood, taas oo la isku qalqaalinayo qaadashada/xoorista aragti, samaynta/joojinta fal iwm; waxaa lagaga sheekeeyee waayaha/wacdaraha/sooyaalka qof, dal iwm; waxaana lagu qaadaadhigaa tilmaamaha walax (shay), noole iwm.
Sida qeexdiisa ku cad, curisku waa uu noocyo badan yahay, mawduucyada uu ku saabsanaan karona waa ay tiro badanyihiin. Haddii aanu wadan xogo si gaar ah loo soo xiganayo, kuma qasbana in uu curisku yeesho tixraac. Haddii aanu si qotodheer u gorfaynin mawduuc baaxad leh, kuma qasbana in uu curisku dheeraado. Si kastaba ha ahaatee, curisku waxa uu curis yahay marka ujeeddadii laga lahaa sida ugu habboon loo gaadho.
Marxaladaha Curis Qorista
Afarta marxaladood ee loo maro qorista curis waxa ay kala yihiin:
Diyaarin (xog ururin)
Hufid iyo Haadin
Inta aadan waxba qorin, baadhitaan ku samee mawduuca aad rabtid in aad wax ka qortid. Wax badan akhri, kuna dedaal in aad meel ku qoratid qodobbada muhiimka ah ee aad isleedahay xidhiidh ayaa ay la leeyihiin mawduucaaga. Xigasho kasta ku ag qor tixraaceeda si aadan u illaawin meeshii/boggii aad ka heshay.
Marka aad urursato xogtii aad u baahnayd, waa in aad ka fekertaa qaabkii aad xogtaa qaydhiinka (cayriinka) ah u bislayn lahayd, ee aad uga soo saari lahayd curis macaan oo meeshii loogu talogalay taabta. Haddaba, curisku waa in uu leeyahay dun xogihiisa isku xidha oo isu haysa, iyo meel uu isugu biyo shubto (biyodhac).
Qodobbo kala socda oo midba ujeeddo gaar ah bixinayo, oo ereyo xidhiidhiyeyaal ah loo dhexaysiis, ma noqdaan curis wanaagsan. Waa in qodobba qodobka uu ka dambeeyo xidhiidh toos ah la leeyahay gundhigga curiska, oo sidii tallaabooyinka jaranjarrada uu midba midka kale kuu gudbiyaa.
Waa in uu curisku leeyahay: Hordhac, Dhex iyo Gunaanad.
Bilowga qoraalku waa in uu lahaadaa hordhac akhristaha u gogoldhiga oo soo jiita, xiiso geliya, dulucda iyo ujeeddada qoraalkana dhadhansiiya oo dareensiiya meesha loo socdo. Qoritaanka hordhacu dadka uma wada fududa, waxaana jira qoreyaal badan oo marka ay qoraalka intiisa kale dhammeeyaan hordhaca raaciya.
Intaa marka aad ku guuleysatid, ee akhristuhu maanka iyo maskaxda kuu furo, dhegtana kuu raariciyo, waa in aad miiddii qoraalka u miistaa. Waa in aad dooddaada mucdeedii oo miisaaman si isdabajoog ah miiska ugu saartaa ilaa uu ka dhergo. Adiguba cusbo iyo sonkor cuniddooda iskuma aadan xejiseene, iska ilaali in aad akhristaha marna Bari la aaddo, marna aad Bogox ka tuurto.
Hadal badani haan ma buuxshee, inta aan lagaa daalin soo af xidh, kuna dedaal in aad akhristaha afkiisa dhadhan macaan oo lagugu xusuusto ku reebto.
Taasi waa feygaarkii (feegaarkii) koowaad!
Qoraalku kama maarmo dib ugu noqosho iyo naashnaashid badan. Wax badan oo aad ka ilduuftay markii hore ayaa aad ku saxaysaa dib-u-qorista labaad. Aragti ama erey markii hore kula qummanaa ayaa laga yaabaa in aad tuurto marka saddexaad. Waa halka quruxda iyo bilicda qoraalku ka dhismaan. Haddii uusan wakhtigu kugu yarayn, qoraalkii meel iska dhig oo dhawr maalmood ka dib ku noqo. Laga yaabee in aad isweydiiso meelaha qaar ciddii qortay!
Qoreyaasha adduunka ugu caansan baa arrinkaas kula wadaaga e, ha yaabin. Haddii aad u aragto lamahuraan, dib u qor meelaha qaarkood. Laakiin fal aadane weligii ma dhammaystirmo e, iska ilaali in ay dibuqoristu ku curyaamiso oo aad weligaaba waxba soo saari weydo.
Tixgeli heerka aqooneed ee akhristaha qoraalkaaga.
Ku dedaal adeegsiga af dadku wada garan karaan, oo ka fogoow afguriga.
Ku dedaal higgaadinta saxda ah, gaar ahaan xarfaha labanlaabma.
Astaamaha qoraalka (joogsi, hakad, iwm) si qumman u adeegso.
Qoraagu kama maarmo aqoonta naxwaha ee si fiican u baro.
aw jaamac curis qoraal tartan tartan-curiseed waxqoris	2017-01-01
Tags aw jaamac curis qoraal tartan tartan-curiseed waxqoris
Previous Tartan-Curiseedka Aw Jaamac ee Taariikhda
Next Sababaha Baaba’a Dawladnimo
“Maxaad kula talin lahayd qofka raba in uu qoraalka bilaabo?” “Akhris, akhris, akhris,” Waa weydiin ...